Fampidirana ny beton nohamafisina
Ny satan'ny fampandrosoana ny rafitra mivaingana nohamafisina Amin'izao fotoana izao, ny beton nohamafisina no endrika rafitra be mpampiasa indrindra ao Shina, kaonty amin'ny ankamaroan'ny totaliny. Mandritra izany fotoana izany dia izy ihany koa no faritra misy rafitra mivaingana mafy indrindra eran'izao tontolo izao. Ny vokatry ny ...
Ny fivoriana fahefatra an'ny mpitantana fahaefatra an'ny fizarana Yinlong dia natao tao Hejian
Tamin'ny 27 aprily 2021, ny fivoriana fahefatra an'ny filankevi-pitantanan'ny Yinlong Co., Ltd. dia natao tao Hejian, Hebei, faritra fanangonana vy avo lenta ary foiben'ny foiben-kazo misy ny vokatra Yinlong. Notarihin'ny filohan'ny orinasa Andriamatoa Xie Zhifeng ny fivoriana. Ny boa fahefatra ...
Spanning the Sky-Yinlong Co., Ltd. dia manampy ny fananganana ny Bridge Bridge Lingang Yangtze
Ny 26-28 martsa 2021, ny Forum Engineering Innovation Bridge Engineering sy ny Lingang Yangtze River Bridge Key Technology Exchange and Observation Meeting dia hatao any Chengdu, Sichuan. Yinlong Hejian City Baozelong Metal Material Co., Ltd. dia ho ampiasaina ho toy ny cabl ...